Shir madaxeedkii aan caadiga aheyn ee IGAD oo laga soo saarey qodobo ku aadan Somalia. – SBC
Shir madaxeedkii aan caadiga aheyn ee IGAD oo laga soo saarey qodobo ku aadan Somalia.
Waxaa saacado ka hor ku soo gabagaboobey magaalada Adis Ababa ee caasimada Itoobiya shir madaxeedkii 18-aad ee aan caadiga aheyn ee madaxda wadamada ku bahoonay urur goboleedka IGAD, shirkaasi oo uu shir gudoominayeen Ra’isalwasaaraha Itoobiya oo xiligan ah gudoomiyaha wareegtada ah ee IGAD ayaa waxaa ka soo qayb galey madaxweynaha DKMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynaha Ugandha, Yoweri Kaguta Musveni, Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir, Madaxweynaha Kenya Mwai Kibaki, isla markaana ah gudoomiyaha gudi hoosaadka IGAD ee Suudaan, Wasiirka arimaha dibada Jibuuti Maxamed Cali Yuusuf, Eng. Mahboub M. Maalim oo ah xoghayaha fulinta ee IGAD, Madaxweynihii hore ee wadanka Koonfur Afrika Thambo Mbeki, Madaxweynihii hore ee wadanka Burunid Pierre Buyoya, oo xiligan ka mid ah African Union High Level
Implementation Panel (AUHIP).
Shirkaasi waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa oo hadalo kala duwan ka jeediyey wafuud caalami ah oo ay ka mid ahaayeen wakiilka gaarka ah xoghayaha guud ee qaramada ee arimaha Soomaaliya Ambassador Augustine Mahiga, Erastus Mwencha, oo ah gudoomiye kuxigeenka golaha midowga Afrika, & Kipruto Arap Kirwa oo ah wakiilka IGAD ee arimaha Soomaaliya gaar ahaan arimaah dib u heshiisiinta qaran.
Kulankaasi markii uu soo dhamaaday ayaa waxaa laga soo saarey warmurtiyeed kaasi oo nuqul ka mid ah ay heshay SBC lagu xusey arimo badan oo Soomaaliya khuseeya.
Warmurtiyeedkaasi ayaa qodobada ugu horeeya waxaa looga hadley arimaha wadanka Suudaan, waxaana qaybta labaad looga hadley arimaha Soomaaliya, halka sidoo kale qaybta ugu dambeysay lagu xusey arimaha wadanka Eritrea.
Heshiiskii Kambala & doorka Madaxweynaha Ugandha ee arimaha Soomaaliya
Warmurtiyeedka waxaa lagu soo dhaweeyey heshiiskii Kampala ee ay qalinka ku duugeen madaxweynaha DKMG Soomaaliya & gudoomiyaha Baarlamanka, waxaana loogu baaqay dhamaan dhinacyada inay fuliyaan hirgalintiisa, isla markaana la gaaro dib u heshiisiin qaran & nabad.
Warmurtiyeedkaasi waxaa sidoo kale lagu amaanay madaxweynaha Ugandha, dadka & dalada Ugandha si la mid ah wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee arimaha Soomaaliya fududeynta heshiiskii Kampala.
Waxaa loogu baaqay dawlada FKMG ah inay soo dhameystirto arimaha waqtiga kala guurka ee horyaal ee ku saleysan heshiiskii Kampala, iyadoo loogu baaqayo dhamaan dhinacyada inay si wadajir ah ugu wada shaqeeyaan inay sidaasi ku soo dhamaato.
Waxaa lagu soo dhaweeyey shirka magacaabista & ansixinta Baarlamanka ee Ra’isalwasaaraha cusub isla markaana si deg deg ah loo soo dhiso dawlad ku qotonta heshiiskii Kampala.
Warmurtiyeedka waxaa sidoo kale loogu mahadceliyey wadaamda ku tabarucay ciidamada AMISOM sida Ugandha & Burundi, kuwaasi oo isku hawlaya inay sii wadaan sidii ay ugu socon lahaayeen ku socoshada xaqiijinta nabada & deganaanshaha Soomaaliya, iyagoo loogu baaqayo in inay sii wadaan taageerada ciidamada DFKMG si ay ugu suurtagasho in guud ahaan gacan ku haynta Magaalada Muqdisho ay hoos keenaan dawlada KMG , isla markaana wadamada balan qaaday inay ciidamo u soo dirayaan Soomaaliya ay si deg deg ah arinkaasi u hirgaliyaan.
Warmurtiyeedka waxaa kaloo lagu celiyey mar kale baaqii loo jeediyey golaha amaanka ee qaramada midoobay ee ku aadanaa in la siiyo taageero hawlglka AMISOM, lana soo saaro qaraar awood lagu xayiro hawlaha dekadaha Kismaayo, Marka, Baraawe & Ceel Macaan,. Isla markaana la xayiro duulimaadka diyaaradaha ee garoomada Bali-Doogle, No.50 & Cisaley si baa lagu yiri warmurtiyeedka loo jaro khadka ay taageerada ku helaan wax loogu yeeray kooxaha xagjiriinta ah.
Warmuriyeedku wuxuu ugu baaqay dhamaan Midowga Afrika, Qaramada Midoobay & xubnaha Beesha caalamka ee arimaha Soomaaliya inay si dhaqsiyo ah ugu guuraan magaalada Muqdisho si ay u xoojiyaan la socodkooda & taageerada hay’adaha dastuuriga ah si loo xaqiijiyo nabada & amaanka deegaanada & degmooyinka dhawaan gacanta dawlada ku soo dhacay .
Warmurtiyeedku wuxuu ugu baaqay cid kasta oo ay khuseyso arimaha amaanka Soomaaliya iyadoo la raaciyo qaraaradii hore in ay kala tashato talaabo kasta urur goboleedka IGAD, sidoo lale wuxuu ku baaqay warmurtiyeedku in la siiyo taageero dhan kasta ah hay’adaha dastuuriga ah ee dawlada.
Warmuriyeedka waxaa la faray taliyeyaasha ciidamada IGAD inay qaadaan talaabooyin ay dib ugu eegayaan horumarka la gaaray, isla markaana ay si mideysan uga wada shaqeeyaan inaan dib looga laaban xaqiijita deganaanshaha.
Waxaa warmurtiyeedka loogu muujiyey in la dhiso gole heer wasiir ah oo IGAD ka tirsan oo isgu yimaada sidii si mideysan loogu qaadi lahaa in isha si buuxda ugu hayaan dhaqdhaqaaqyada xagjiriinta nabad diidka ah, shakhsiyaadka & ilaha dhaqaale ee caawiya hawlaha argagixisada guud ahaan gobolka.
Warmuriyeedku wuxuu isagoo ka damqananaya xaaladaha abaareed ee ka taagan Soomalaiya, isla markaana u damqanaya dadka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka & caruurta xaalada abaarta & cunto la’aanta waxaa loogu baaqayaa hay’adaha caalamiga ah inay si deg deg ah u gaarsiiyaan gargaar aadamtinimo dadka baahan, si loo joojiyo dadka ku soo qulqulaya wadamada dariska hab qaxootinimo ah.
Sidoo kale warmurtiyeedkaasi waxaa loogu baaqay golaha Amaanka ee qaramada midoobay inay sii wadaan la socoshada go’aanka cunaqabareynta hubka ee Soomaaliya & Eritrea.